သကျတနျ့ခြို: August 2012
တစ်ခါတုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ လက်ထပ်ပြီးစ သူ့ဇနီးနဲ့အတူ နေအိမ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ် ။ သူတို့ဟာ အိမ်ကိုရောက်ဖို့အတွက် ကန်ကြီးတစ်ကန်ကို ဖြတ်ရတယ် ။ အဲဒီကန်ကြီးကို လှေတစ်စင်းနဲ့အတူ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ ဖြတ်ခဲ့ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရုတ်တရက် လေမုန်တိုင်းတွေ တိုက်လို့ ကန်ထဲမှာ လှိုင်းကြီးလှေကြီးဖြစ် လာခဲ့တယ် ။ အမျိုးသားဖြစ်သူက စိုးရိမ်ပူပန်တတ်သူဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးကတော့ အရမ်းကို ထိတ် လန့် ကြောက်ရွံ့နေခဲ့တယ် ။ သူတို့မှာ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိတော့ဘူးပေါ့ ။
လှေကလေးက သေးငယ်ပြီး လေမုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လှိုင်းလုံးတွေကပိုပြီးကြီးမားပါတယ် ။ အချိန် မရွေး လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး နစ်မြုပ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားဖြစ်သူက တိတ်ဆိတ် စွာနဲ့ ၀မ်းနည်းနေတယ် ။ ငြိမ်သက်လို့ ငူငူငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ ဘာမှမဖြစ်တော့သလိုပေါ့ ။
အမျိုးသမီးဖြစ်သူကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကြောက်လန့်မှုနဲ့ တုန်ခါနေခဲ့ပြီး အမျိုးသားဖြစ်သူကိုမေးတယ် ။ “ ရှင်မကြောက်ဘူးလား ”
ဒါငါတို့ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်နဲ့တူတယ် ဟိုဖက်ကမ်းစပ် ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူး အချို့သော အံ့သြဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေကသာ ငါတို့ကို ကယ်ဆယ်နိုင်လိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ငါတို့သေ မှာကျိန်းသေပဲ
“ ရှင်မကြောက်ဘူးလား ရှင်ရူးသွားတာလား ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုဖြစ်နေတာလား ရှင်က ကျောက်တုံးတစ်တုံးလား တစ်ခုခုပဲ ”
အမျိုးသားဖြစ်သူကရယ်မောလိုက်တယ် ပြီးတော့ ဓါးရှည်ကို ဓါးအိမ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် ။ အမျိုးသမီးဖြစ် သူကပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် ။ သူ ဘာလုပ်ဖို့လဲ ??
ပြီးတော့ သူက အဲဒီဓါးရှည်ကို အမျိုးသမီးရဲ့လည်ပင်းနားကို နီးကပ်စွာထိလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ ထိလုထိခင်လေး အထိ ဓါးကို ထားလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဓါးကို လည်ပင်းနဲ့ထိအောင် ထားလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့မေး တယ် “ မင်းကြောက်နေလား ”
အမျိုးသမီးဖြစ်သူကရယ်မောလိုက်ပြီး ပြောတယ် ။ “ ကျွန်မက ရှင့်ကိုဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲ ဓါးက ရှင့်လက်ထဲ မှာပဲ ကျွန်မ ဘာလို့ ကြောက်ရမှာတုန်း ရှင်ကျွန်မကို ချစ်တာ သိနေတာပဲ ”
အမျိုးသားက ဓါးကို ဓါးအိမ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ် ။ “ အဲဒါ ငါ့အဖြေပဲ ” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
“ ငါ့ကို ဘုရားသခင်ကချစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ် မုန်တိုင်းက သူ့လက်ထဲမှာပဲ ငါလည်းဘာကြောင့်ကြောက်နေ ရမှာလဲ ”
ဘာတွေပဲ မုန်တိုင်းထန်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးရွားမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါစေ ကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့ ဆိုတဲ့ အတွေး ကို တွေးပါ ။
အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေဆိုးတွေက လွတ်မြောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ မလွတ်မြောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော် တို့ကောင်းဖို့ဆိုတာကို တွေးကြည့်ပါ ။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အရာရာဟာ ဘုရားသခင် ရဲ့လက်ထဲမှာ ရှိနေပြီး ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်တော့မှ မှားယွင်းမှုတွေကို မဖန်တီးဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ကသာ လမ်းမှားတွေကို လျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ် ။
ဒီပုံပြင်လေးရဲ့ သော့ချက်ကတော့ “ လူတစ်ယောက်အတွက် ဘ၀မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ - ယုံကြည်မှု - ကို ဖော်ညွှန်းသွားခြင်းဖြစ်တယ် ။ ယုံကြည်မှု ဟာ သင့်ရဲ့ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲ သွားစေနိုင် တယ် ။
TRUST IN GOD အား မူရင်းအတိုင်း ဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:31 PM 12 comments:
ဥတုရာသီတောကိုမှီ -- လက်လုပ်လက်စားတွေ ဘာကိုမှီနေသလဲ
ဒီမိုးက နေရာအနှံ့ ရေတွေကြီးစေခဲ့
အိမ်ခေါင်မိုးထက် အေးစက်ရှာသော ဘ၀အချို့ဟာ
မျက်ရည်နဲ့ မိုးတွေ ရောနေဆဲ ။
တသောသော ကျဆင်းသော အိမ်မက်အချို့
ကတ္တရာဟာ အရည်အသွေးညံ့သလား လူတွေကအရည်အသွေးညံ့တာလား
ဒီမိုးက ရေတွေကြီးစေတယ် ။
တခါတုန်းကလည်း ကျိန်စာဆိုးတွေ အတိုက်ခံရဖူးခဲ့
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒါကို “ နာဂစ် ” လို့ အမည်ပေး
ငါတို့ကို သွေးအေးအေးနဲ့ သတ်သွားတယ်
ဘယ်သူက အစားပြန်လျှော်ပေးခဲ့သလဲ ။
စိုက်သော သစ်ပင်ကိုပဲခုတ် ငုတ်တိုဖြစ်အောင်ကြံ
အခု အိမ်ပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေတယ် --
ငါတို့အိပ်မက်တွေလည်း ရေမြုပ်နေတယ် ။
အေးတယ် အေးတယ် ထံရံပေါက်က လွင့်စင်ထွက်သော မိုးစက်တွေက
အဲကွန်းနဲ့ဇိမ်ခံကားထဲက သူဌေးက အေးတယ်အေးတယ် အော်တယ်
ခင်ဗျားတို့ စကားလုံးတွေက (တဆိတ် ) နားခါးလွန်းတယ် ။
နေရာအနှံ့မှာ ရေတွေ ပြည့်လျှံထွက်
ဘ၀တွေရဲ့ သောကတွေလား ဘ၀တွေရဲ့မျက်ရည်တွေလား
အကျိုးဆက်ဟာ ရောဂါဘယတွေကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူခေါ်နေတယ် ။
ပျက် - - - စီး - - ကုန် - - တယ် ။
၂ ၅ သြ ဂု တ် လ
Posted by သက်တန့်ချို at 4:27 PM3comments:
ဥမပေါက်သေးခင် ကြက်ဘယ်နှစ်ကောင်ရှိလဲ မရေတွက်ကြည့်ပါနဲ့
တစ်ခါတုန်းက နွားနို့ သယ်ပို့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယေက် က ဈေးထဲမှာ နွားနို့တွေရောင်း ဖို့အတွက် နွားနို့ ပုံးလေး ကို ခေါင်းပေါ်ရွက်လို့ လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် ။ ဦးခေါင်းပေါ်မှာ နွားနို့ပုံးလေးရွက်ရင်း လမ်းတလျှောက် နွားနို့ရောင်းပြီးရတဲ့ငွေတွေနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တွေ မက်လာခဲ့တယ် ။
“ အင်းနွားနို့ရောင်းရတဲ့ငွေတွေနဲ့ အိမ်နောက်ဖေးက မြေကွက်လပ်မှာ ကြက်ပေါက်လေးတွေ အကောင် ၁၀၀ လောက်ဝယ်မွေးရမယ် သူတို့ကြီးလာတဲ့အခါ ငါဈေးမှာသွားရောင်းမယ် အဲဒီအခါ ဈေးမှာ ငါ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရမှာပဲ ” အဲဒီလိုတွေးပြီး ကောင်မလေးက လမ်းဆက်လျှောက်လာတယ် ။ ပြီးတော့ ဆက်ပြီးတွေးပြန်တယ် “ အဲဒီရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ ငါ ဆိတ်လေး ၂ ကောင်လောက်ဝယ်မွေး၇မယ် သူတို့ကြီးလာ တဲ့အ ခါ ငါ ရောင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ငွေတွေ ဒီထက်ပိုရလာမှာပဲ ” စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တွေ ဆက် မက်ပြီး ကောင်မလေးလည်းဆက်ပြီးလျှောက်လာခဲ့တယ် ။
“ မကြာခင်မှာ ငါ နောက်ထပ် နွားတစ်ကောင်ဝယ်နိုင်မှာပဲ အဲဒီအခါ ငါ နို့တွေများများ ညှစ်ပြီး ရောင်းနိုင်ဦး မယ် ငွေတွေလည်းထပ်ရလာဦးမယ် ” အဲဒီလို တွေးပြီး ပြုံးပျော်လို့ ကောင်မလေးဟာ ရှေ့က ခဲလုံးလေးကို ခုန်ပြီးကျော်လိုက်တယ် ။ ရုတ်တရက်ပဲ ဟန်ချက်မထိမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီး လဲကျသွားတယ် ။ အဲဒီအခါ နွားနို့ပုံး လည်းမှောက်ကျသွားပြီး မြေပြင်ပေါ် နွားနို့တွေ အကုန်လုံးဖိတ်ကျကုန်ခဲ့တယ် ။ အခုဆို ကောင် မလေး လည်းဆက်ပြီး အိပ်မက်မမက်နိုင်တော့ဘူး ။ ၀မ်းပန်းတနည်း မြေပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ငို လိုက်ပါတော့တယ် ။
“ ဥမပေါက်သေးခင် ကြက်ဘယ်နှစ်ကောင်ရှိလဲ မရေတွက်ကြည့်ပါနဲ့” ဆိုတဲ့စကားရှိတယ် ။ ရှေ့မှာ ကြိုဖြစ်မ လာသေးပဲ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မက်နေခြင်းဟာ လက်ရှိ အနေအထားတွေကိုပါ ပျက်ယွင်းစေတယ် ။
- စိတ်ကူးယဉ်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့မဆန်ဘူး ပန်းတိုင်ကို လက်တွေ့ကျကျ အကောင်ထည်ဖော်ရမယ်
- အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီး Plan လုပ်ရမယ် လမ်းလျှောက်နေတုန်း စဉ်းစားတဲ့အ ခါ နွားနို့ပုံး ဖိတ်တာပဲ အဖတ်တင်မယ် ( အမှန်ဆို လက်ထဲ မှာ ပိုက်ဆံရလာတဲ့အခါမှ ဆက်စဉ်းစားသင့်တယ် )
- တစ်ခုခုဖြစ်မလာသေးခင် စိတ်ကူးနဲ့ကြိုပြီး မပျော်ထားပါနဲ့ မတွက်ချက်ထားပါနဲ့ တခါတလေမှာ တစုံတ ခုသောအကြောင်းကြောင့် ကိုယ်မမျှော်လင့်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်
THE MILKMAID အားဘာသာပြန်ခံစားသည်
Posted by သက်တန့်ချို at 4:22 PM5comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 4:46 PM5comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 12:24 PM No comments:
ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၅၇ ခုနှစ်လောက်တုန်းကပေါ့ ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်း တိုင်တစ်ခုကို သူချမှတ်တယ် ။ အဲဒီအချိန်လောက်တုန်းက အမေရိ ကန် ကြေးစား ဘော လုံးလောက (ရပ်ဂဘီဘော ) မှာ ဂျင်မ်ဘရောင်းဟာ အရမ်းကိုနာမည်ကျော်ကြား တဲ့ နောက်တန်း အလယ် လူဖြစ် တယ်။ ပိန်ပိန်ညှောင်ညှောင်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ဂျင်မ်ဘရောင်း ဆီက အော် တိုလက်မှတ် လို ချင်ခဲ့တယ် ။ အဲဒီအော်တိုလက်မှတ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကို ပြည့်ဖို့အ တွက် ကောင်လေး မှာ အခက်အခဲတွေအများကြီးကျော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ် ။
ကောင်လေးဟာ လူမည်းအသိုင်းအ၀န်းမှာ ကြီးပြင်းလာရသူဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲလွန်းတဲ့အတွက် ဘယ်သောအခါမှ အစားအစာကို ၀၀ လင်လင်မစားခဲ့ရဘူး ။ အဲဒီလိုနဲ့ အာဟာရချို့တဲ့လာမှုကြောင့်သူ့မှာ အရိုးပျော့ရော ဂါတစ်မျိုး ခံစားလာရတယ် ။ သူ့ရဲ့အရိုးပေါ်အရေတင်ခြေထောက်လေးဟာ ခွင်ခွင် ကလေးဖြစ်နေခဲ့ပြီး သံမဏိ သံချောင်းထိမ်းတံတွေနဲ့ ကျားကန်ပေးထားရတယ် ။ သူ့မှာ ဆင်းရဲလို့ ပိုက်ဆံလည်း မတတ်နိုင် တဲ့အတွက် ဘောလုံးပွဲကို ၀င်ကြည့်ဖို့ လက်မှတ်ဖိုးလည်းမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး ။ အဲဒါကြောင့် ဂျင်မ်ဘရောင်းဘော လုံးကစားပြီးလို့ ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်ထိ တွေ့ဆုံဖို့ အ၀တ်လဲခန်းထဲကနေ စိတ်ရှည် ရှည်နဲ့စောင့်နေခဲ့တယ် ။
ဂျင်မ်ဘရောင်းနဲ့တွေ့တော့ အော်တိုရေးပေးဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ နဲ့ပြောခဲ့တယ် ။ ဂျင်မ်ဘရောင်း လက်မှတ် ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ကောင်လေးက ပြောတယ် ။
“ မစ္စတာဘရောင်းရေ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်က အရမ်းကြိုက်တာဗျ ခင်ဗျားပုံကို ကျွန်တော့် အခန်းက နံရံတွေမှာ ချိတ်ထား တယ်ခင်ဗျ စံချိန်တွေအများကြီးတင်ပြီး ဆုတွေအများကြီးရခဲ့တာလည်း ကျွန်တော်သိပါတယ် ခင်ဗျားက ကျွန်တော်အလေးစားဆုံးလူတစ်ယောက်ပါဗျာ ”
ဂျင်မ်ဘရောင်းက ပြုံးပြီးနားထောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ထွက်သွားဖို့ပြင်လိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့်ကောင်လေးက မပြီးသေးပဲဆက်ပြောတယ် ။ “ ကျွန်တော်တစ်နေ့ကျရင်တော့ မစ္စတာဘရောင်းတင်ထားတဲ့စံချိန်တွေ အားလုံး ကို ကျွန်တော်ချိုးမယ် ” လို့ ရဲဝံ့စွာပြောလိုက်တယ် ။
ဘရောင်းက အံ့သြသွားပြီး မေးတယ် ။ “ သားနာမည်က ဘယ်လိုခေါ်လဲ ”
“အိုရင်သယ်ဂျိမ်းစ်ပါ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့်ကို အိုဂျေလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ် ” ကောင်လေးကပြန်ပြောတယ် ။
နောက်ပိုင်းမှာ အိုဂျေဆင်မဆင်ဆိုတဲ့ အရိုးပျော့ကောင်လေးဟာ တကယ့်ကို ထူးချွန်ထင်ရှာ တဲး့ ဘော လုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာတစ်ခုကြောင့် ဘောလုံးလောက ကနေ စောစော စီးစီးနှုတ်ထွ့က် လိုက်ရပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ဂျင်မ်ဘရောင်းတင်ခဲ့တဲ့ စံချိန်တွေထဲက ၃ ခုကလွဲလို့ အားလုံးကို သူချိုးနိုင် ခဲ့တယ် ။
လူတွေကို စိတ်ဓါတ်တတ်ကြွလာအောင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေက ရုန်းထွက်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံး ခွန်အားပေးနိုင်တာ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ် ။
လောကမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး မဖြစ်သေးတာနဲ့မဖြစ်သင့်တာပဲရှိလိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့် သင်လည်း ဘ၀မှာ ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကို တိတိကျကျချမှတ်ပါ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားပါ ။ တချိန်မှာ ကိုယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် တကယ်ဖြစ်လာတာကို သင်တွေ့ရမှာပါ ။
စာရေးသူ ဒန်ကလာ့ခ် ရေးသားသော Make It Come True အားဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:11 PM7comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 3:58 PM6comments:
တစ်ခါတုန်းက အိမ်ခြေယာခြေမဲ့ လူမျိုးစုတစ်စုရှိတယ် ။ သူတို့ဟာ နေရာအတည် တကျမနေကြပဲ ရေကြည်ရာမြက်နုရာလျှောက်သွားနေလေ့ရှိတယ် ။ တစ်ညတော့ သူတို့ဟာ နေရာတစ်ခုမှာ စခန်းရပ်နား ဖို့ပြင်နေတုန်း သူတို့နားကို လက်ဖြာနေတဲ့အလင်းတန်းကြီးတစ်ခု ကျလာခဲ့တယ် ။ သူတို့လူစုက အဲဒါကို ကောင်းကင်ထက်က တန်ဖိုးရှင်ကြီးပဲလို့ တွေးလိုက်ကြပြီး သူတို့ကို ဘာတွေများ မှာကြားမ လဲလို့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့ စောင့်စားနေခဲ့ကြတယ် ။
အလင်းတန်းထွက်လာပြီးတဲ့အခါ အဲဒီအလင်းတန်းထဲကနေ အသံတစ်သံ ထွက်လာခဲ့တယ် ။ “ ကဲ သင်တို့ လူစု ကျောက်စရစ်ခဲတွေကို ကောက်နိုင်သမျှ ကောက် ကြပါ ပြီးတော့ ကုန်းနီအိတ်တွေထဲမှာထည့်ပြီး သွားပါ တစ်နေ့ခ ရီးသွားပြီးနောက်တစ်နေ့ညဖက်မှာသင်တို့အားလုံးပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ် တချိန်တည်းမှာပဲ သင်တို့ စိတ်မ ချမ်းမသာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ် ” လို့ပြောပြီး ပျောက်ကွယ်သွားတယ် ။
သူတို့လူစုတစ်ခုလုံး စိတ်ပျက်ပြီး ဒေါသတွေထွက်သွားကြတယ် ။ သူတို့လူစု ကြီးပွားချမ်းသာ ဖို့နဲ့ လောကကြီး အကျိုးဘယ်လိုသယ်ပိုးရမလဲ ချမ်းသာသုခတွေကို ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ဆိုတဲ့အရေးကြီး တဲ့အချက်တွေ ကိုမပြောသေးပဲ ဘာမဟုတ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့အရာကို ခိုင်းသွားလို့ မကျေနပ်ဘူးဖြစ်နေ ခဲ့ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် လည်းအလင်းတန်းထဲက တန်ခိုးရှင်လို့ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဖြစ် တာကြောင့်လည်း လုံးဝလစ် လျှူမရှုဝံ့ဘူးဖြစ်နေကြတယ် ။ ဒါနဲ့ သူတို့လည်း အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြော ဆိုပြီး ကျောက်စ ရစ်ခဲ တစ်လုံးနှစ်လုံးလောက်ကို ကုန်နီအိတ်တွေထဲထည့်ခဲ့ကြတယ် ။
နောက်တစ်နေ့ မှာ တစ်နေ့လုံးခရီးနှင်ခဲ့ကြပြီး ညဖက်စခန်းချဖို့နေရာကိုရွေးခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒီအခါ သူတို့ ကုန်နီအိတ်တွေထဲနှိုက်ကြည့်တဲ့အခါ ကျောက်စရစ်ခဲတွေဟာ စိန်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ကြရတယ် ။ စိန်တွေရ လာတဲ့အတွက်သူတို့တဖွဲ့လုံးဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ကြရတယ် ။ ဒါပေမယ့် အများကြီးမကောက်မိ ခဲ့လေခြင်း ဆိုပြီး နောင်တတွေရလို့ ၀မ်းနည်းခဲ့ကြရတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ယနေ့အချိန်မှာ တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကနေရတဲ့သင်ခန်းစာတွေ ၊ လေ့လာဆည်းပူးခဲ့တဲ့ ပညာရပ်တွေဟာ အခုအချိန်မှာ ဘာမှသိပ်အသုံးမ၀င်တဲ့ကျောက်စရစ်ခဲတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့်တကယ်ဘေးကြုံရတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီကျောက်စရစ်ခဲတွေဟာ စိန်တုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးကိုယ့်ကို ကယ်တင်နို င်ပါလိမ့်မယ် ။
ဒီနေ့ဒီအချိန်ကစလို့ သင်လည်းကျောက်စရစ်ခဲတွေကို ရနိုင်သမျှ စုဆောင်းပါ ။ များနိုင်သမျှ သယ်နိုင်သမျှ သယ် ယူပါ ။ နောင်တချိန်လျှောက်လှမ်းမယ့်ခရီးလမ်းမှာငယ်ငယ်ကစုဆောင်းထားတဲ့ကျောက်စရစ်ခဲတွေဟာ စိန်တွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ သင့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ် ။
John Wayne Schlatter ရေးသားသော The Magic Pebbles အား ဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:32 PM4comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 3:28 PM No comments:
တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်က လိပ်ပြာဖြစ်လာမယ့် ပိုးအိမ်ကလေးကိုတွေ့မိတယ် ။ အထဲမှာတော့ လိပ်ပြာဘ ၀မရောက်သေးတဲ့ ပိုးတုံးလုံးလေးပေါ့ ။ အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီး သူက အဲဒီပိုးအိမ်ကလေးကို နေ့တိုင်း ဘယ်အချိန်အကောင်ပေါက်လာမလဲဆိုပြီး ဂရုတစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ် ။ တစ်နေ့မှာတော့ ပိုးအိမ်ထဲက အပေါက်သေးသေး ပေါ်လာခဲ့တယ် ။ အဲဒီလူက ပိုးအိမ်အနားမှာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး နာရီပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပိုးအိမ်ထဲ က လိပ်ပြာလေး တွန်းထွက်လာမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေခဲ့တယ် ။ အထဲက အကောင်လေးကတော့ အားရှိ သမျှ ရုန်းကုန်ပြီး အပေါက်သေးသေးလေးကနေ ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ် ။
ဒီလိုနဲ့ကြည့်နေရင်းမှာပဲ အထဲက အကောင်လေးလှုပ်ရှားမှုဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တယ် ။ အဲဒီလူထင်လိုက် တာကတော့ လိပ်ပြာဖြစ်မယ့်ပိုးတုံးလုံးလေးဟာ ဒီအပေါက်လေးထဲကနေ မထွက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ ။ ဒါနဲ့ သူက လိပ်ပြာလေးကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ ကပ်ကြေးသေးသေးလေးသွားယူပြီး ပိုးအိမ်လေးရဲ့အပေါက်ကို ထိုးခွဲလို့ အပေါက်ချဲ့ပေးလိုက်တယ် ။ လိပ်ပြာလေးဟာ လွယ်ကူစွာပဲ အပြင်ရောက်လာခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့် လိပ်ပြာလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ၀ဖောင်းနေ ခဲ့ပြီး သေးငယ်ပြီးရှံ့ တွနေတဲ့အတောင် ပံတွေသာ ပါလာခဲ့တယ် ။ အဲဒီလူက လိပ်ပြာလေး အတောင်ပံတွေကြီး လာပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သယ်ဆောင်လို့လေမှာ ပျံဝဲနိုင်မယ့်အချိန်ထိ စောင့်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာခဲ့တော့ဘူး ။
တကယ်တော့ လိပ်ပြာကလေးဟာ ကျန်ရှိနေတဲ့သူ့ဘ၀တလျှောက်လုံး ဒီ လို ၀ဖောင်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရှံ့တွနေ တဲ့ အတောင်ပံတွေကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ရပြီး ဖြတ်သန်းရတော့မှာဖြစ်တယ် ။ သူ ဘယ်တော့မှ လေပေါ် မပျံသန်းနိုင်တော့ဘူး ---- ။
အဲဒီလူဟာ လိပ်ပြာကလေးကိုကူညီချင်စိတ် သနားစိတ်ရှိခဲ့ပေမယ့် ပိုးအိမ်ရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ လိပ်ပြာတွေ အကြောင်းကို နားမလည်ခဲ့ဘူး ။ တကယ်တော့ လိပ်ပြာကလေး ဟာ သေးငယ်တဲ့ အပေါက်လေး ကနေ ရုန်းထွက်လို့ အပြင်ကို ထွက်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဖြင့် လိုအပ်တဲ့ အားအင်တွေရရှိလာမယ် ခန္ဓာကိုယ်က ၀ဖောင်းစေ တဲ့အရည်တွေကို ညှစ်ထုတ်လို့ တောင်ပံတွေက နေတဆင့် အားယူပြီး သေးငယ်တဲ့အပေါက်ကလေးကနေ သဘာဝအတိုင်းသာ ရုန်းကန်ပျံသန်းရတာဖြစ်တယ် ။
ကျွန်တော်တို့ရော --- ဘ၀မှာ အခက်အခဲဆိုတာတွေ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရတာတွေ မကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် -- ကျွန်တော် တို့ လိပ်ပြာကလေးလိုပဲ ဘယ်တော့မှ ပျံသန်းခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး ။
အခက်အခဲနဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းက ဘ၀ခရီးမှာ ကောင်းမွန်စွာ ဖြတ်သန်းဖို့အတွက် ကျွန်တော် တို့ကို ပေးတဲ့ခွန်အားတွေပဲဖြစ်တယ် ။
Benefits of Struggling အား ဆီလျှော်သလိုဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:42 PM5comments:
အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ ခေါင်းမဖော်နိုင်တာကြောင့် အခု ၂ ရက်လောက်အတွင်း ဘာစာမှ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ အမှန်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက် အိမ်ကိုပြန်တော့ လမ်းမှာ ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကို မျှဝေချင်လို့ပါ ။ အခု မှ အလုပ်လေးနည်းနည်းပါးတုန်း ရေးဖြစ်ခဲ့တယ် ။
အဲဒီနေ့က မိုးက သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမည်းလို့နေတယ် ။ လေကလည်း အရမ်း တိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း ဘောင်းဘီရှည်လေးအသာလိပ်တင် ကားဂိတ်ကို ထီးလေးဆောင်းလို့ ထွက်လာခဲ့တယ် ။ အချိန်က ည နေ ၅ နာရီ ၄၀ မိနစ်လောက် ။ နွေရာသီဆို ငါးနာရီလေးဆယ်မိနစ်ဆိုတာ လင်းတုန်းရှင်း တုန်း ကာလပေါ့ ။ မိုးတွင်းလိုအချိန်မှာတော့ ငါးနာရီကျော်တာနဲ့ မှောင်စပြုလာပြီ ။ ဆယ်မိ နစ်လောက်ကားဂိတ်မှာစောင့်ပြီးတဲ့အခါ ကျွန်တော်စီးနေကြ ၄၃ အထူးကားကြီး ၀ူးကနဲထိုးရပ်လာပါတော့တယ် ။ ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်းဝမ်းသာအားရ ကားပေါ်တက်ခဲ့တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကံဆိုးတာလားကံကောင်းတာလားမသိ ၂ ယောက်ခုံ တစ်ခုံလွတ်နေခဲ့တယ် ။ အဲဒီမှာ ၀င်ထိုင်ပြီးဟိုဟို ဒီဒီတွေးရင်း ငေးနေ တုန်းနောက် တစ်မှတ် တိုင်လောက်မှာ လူတစ်ယောက်တကျွန်တော့်ဘေးဝင်ထိုင်တယ် ။ အသက်က ၃၀ ကျော်လောက် ရှိမယ် ထင်တယ် ။ ဗလကြီးကလည်း ဟက်နေရောဗျာ ။ ဒီလူတော်တော် ကစားထားပုံပဲလို့တွေးမိသေးတယ် ။ စိတ်ထဲ ကတောင် ကြိတ်ပြီးအားကျနေတာ ။ ကိုယ်က ဖလံလေးကိုး ။
ဒီလိုနဲ့ ဆူးလေ ယောက်လမ်း ဗဟန်း ၃ လမ်းအဲဒီလောက်ထိ ဘာမှမထူးသေးဘူး ရွှေဂုံတိုင်နားရောက်တော့ ကိုယ့်လူတို့ သိပါတယ်ကားကလည်းသိပ်ကြပ်တယ်မဟုတ်လား ။ ဒီတော့ ကားပေါ်တက် လာတဲ့လူတွေ ကလည်း အ များကြီး အထူးကားကြီးပေါ် ကြပ်ပိတ်သိပ်နေတာ ရေးရတာများလွန်းလို့ အဲဒီအကြောင်း မရေးတော့ ဘူး ။ (တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော်နှင့်၄၃ အထူး ဆိုပြီးဆောင်းပါးရေးဖူးတယ် ဖတ်ချင်သူများ ဘလော့ထဲမှာ ရှာဖတ်ကြပါ ) အဲဒီလိုနဲ့ ကံဆိုးချင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကားအနောက်ပိုင်းက မီးချောင်းက ပျက်သွားရောဗျာ ။ မှောင်သွားတာပေါ့ ။ အဲဒီမှာ ဇတ်လမ်းကစတော့တာပဲဗျို့ ။ ဘေးက ဗလ ကြီးက ပထမဆုံး ကျွန်တော့် ပေါင်ကို သူ့လက်နဲ့လာ ထိသဗျ ။ ပထမတော့ အော်ကားစီးရင်းအမှတ်တမဲ့ ထိတာပဲလေဆိုပြီး နေလိုက်တယ် ။ သိပ်မကြာဘူး ကျွန်တော့်ပေါင်ကို သူ့လက်နဲ့အပေါ်ကနေဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ် ။ “ ဟင် .. ” အဲဒီမှာတင် ကြက်သီးမွှေးညှင်း ရှိသမျှ တကိုယ်လုံးအမွှေးတွေ ထောင်တက်ကုန်ပါရောဗျို့ ။ ဆံပင်မွှေးတို့ ဘာတို့ပြောပါတယ် ။ အဲဒီတော့ မှ သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ အောင်မငီး “ အပုန်းကြီး ” ဗျာ တကယ့်ကို အပုန်းကြီး ။ ထင်တောင်မထင်ဘူး ။ ကျွန်တော့်ကို ရီဝေေ၀ မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်နေလိုက်တာများ အခုထိ တွေးရင်းတောင် ကြည်သီးထတယ် ။ ကျွန်တော်လည်းချွေးတွေပျံလာပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲစဉ်းစားတယ် ။
ပေါင်ကိုင်ယုံလောက်ဆို အင်းလေ ထားပါတော့ ငါ့ဘ၀တော့မပျက်သေးပါဘူးတော့ ။ ကိုယ့်လူရေ မရဘူးဗျို့ ဒီအပုန်းကြီး ကျွန်တော့်ဖက်ကို တိုးတိုးလာယုံသာမက သူ့လက်က ကျွန်တော့်ပေါင်ရင်းရောက်တော့မယ် အခြေအနေက သိပ်မကောင်းလှဘူး ။ဒီတော့ကျွန်တော်လည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ ဟောက်လိုက်တယ် ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေါ့ ။ “ ဟေ့လူ ဒါဘာလုပ်တာလဲ ” “ မောင် ..မကြိုက်ဘူးလားဟင် ” တဲ့ အောင် မငီး အောင်မငီး ကျုပ်ကို မောင်တဲ့ အရပ်ကတို့ရေ ကားပေါ်ကသာခုန်ချလိုက်ချင်တော့တယ် မသေရဲသေး လို့ ပေါ့ ။ သူက သူ့စာအုပ်တွေ ကိုင်ထားတဲ့ဖိုင်နဲ့လက်ပေါ်အုပ်ထားတော့ တခြားလူတွေက ဘယ်သိပါ့မလဲဗျာ ။ ကိုယ်က သာ ခံစားနေရဲ့ကောင်ကိုး ။ ကျုပ်မှာသာ ဆင်းမယ့်မှတ်တိုင်မြန်မြန်ရောက်ပါစေဆုတောင်းနေရတယ် ။ ပြီးတော့ ဒီအပုန်းကြီးက သူ့ဗလကြီးနဲ့တခါတခါ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပေါင် ကိုလည်းကိုင် ထားသေး တယ်ကျုပ်ပခုံးကိုလည်း မှီထားလိုက်သေး အား....ဆိုးလိုက်တဲ့ဘ၀ ဗျာ ။ အဲဒီတော့မှ သေချာကြည့်မိ တာ အောင် မလေး ခြေသည်းလက်သည်းတွေတောင်ဆိုးထားသေးသဗျ ။ ပြီးတော့ အပုန်းကြီးက တိုးတိုးလေးမေးတယ် “ မောင် ဘယ်မှာ ဆင်းမှာလဲတဲ့ ” အောင်မလေး မြတ်စွာဘုရား ကျုပ်အိမ်ကိုတောင် သူကလိုက်ဦးမလို့လားမသိ ။ မဖြစ်ချေ ဘူးငါတော့ ဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်မရောက်ခင်ဆင်းမှဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်တယ် ။
ကျုပ်သူ့လက်ကြီးကို ဖယ်ဖို့ ကျုပ်လက်နဲ့ဆွဲထုတ်တယ်မရဘူးဗျို့ သံလိုက်နဲ့ သံကပ်နေသလိုပဲ ။ အဲဒီအချိန်ဗျာ လူတစ်ကိုယ်လုံးအေးစက်ပြီး ကျုပ်ဘယ်လောက်ကြောက်နေမလဲ စဉ်းစားကြည့် ။ ကျုပ်ဗျာ ရန်တွေဘာတွေ လည်းဖြစ်ဘူးပါတယ် လူမိုက်ကြီးတွေဆိုတဲ့ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေနဲ့လည်းတွေးဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ ဒီလောက် မကြောက်မိပါ ဘူးဗျာ တကယ်ပါ ဒီအပုန်းကြီးနဲ့ကျမှ ကျောရိုးထဲ စိမ့်ဝင်ရလောက်အောင်ကြောက် တာပါကလား ။ ကျုပ်အသက်က သူ့လက်ထဲမှာ မဟုတ်လား ။ တလွဲမတွေးကြနဲ့ဦး ကျုပ်အရှက်ကို ပြောတာ အာ ပိုဆိုးကုန်ပါပြီ ။ ထားတော့ ဒါနဲ့ “ ကျုပ်ဟာကျုပ်ဘယ်ဆင်းဆင်းခင်ဗျားနဲ့ဘာဆိုင်လဲ ” ဆိုပြီးကျုပ်လည်း အဆင်း ကုန်းရုန်း ထပြီးဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်မရောက်ခင်ဆင်းလိုက်တယ် ။ ဟူး...အခုမှ လွတ်ပြီလို့တွေးပြီး အနောက် ကိုကြည့် လိုက်တော့ “ အပုန်းကြီး ” အောင်မလေး ကျုပ်နောက်လိုက်လာသဗျ ။ ဟာ ငါ ဒီတစ်ခါတော့ တကယ်ရေတိမ်နစ်ရှာပြီ သူနဲ့ကျုပ်က ဓါတ်တိုင်တစ်တိုင်အကွာမှာ ဆင်းလိုက်တဲ့မှတ်တိုင်ကလည်း မီးတွေ ပျက်နေတယ် ။ မိုးကလည်း သည်းသည်းလေး ဘေးနားမှာလည်းခြုံပုတ်တွေနဲ့လူကလည်းပြတ် ။ ဘုရားဘုရား ...
အဲဒီမှာ ကျုပ်ကြောင်ပြီး ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ တက်စီလည်းငှားမရ သွားရမယ့်မှတ် တိုင်ကလည်း လိုသေး တယ် ဒီတော့ ကျုပ်ကြံရာမရဖြစ်နေတုန်း ဆိုက်ကားတစ်စီး တွေ့လိုက်တယ် ။ ဘယ်ရမလည်း ကျုပ်လည်းအား ရ၀မ်းသာပြေးတာပေါ့ ဆိုက်ကားသမားဆီ ။ ပြီးတော့ ဘာမှမပြောပဲတက်ထိုင် နင်းနင်း..မြန်မြန်နင်း ...ဆို ပီး ပြောလိုက်တာ ဆိုက်ကားသမားလည်း ခြေဦးတည့်ရာစွတ်နင်းတော့တာပဲ ။ အပုန်းကြီး ကတော့မျက် ရည်တွေ ၀ဲလို့ ကြေကွဲနေရှာရော့မယ် ။ မတတ်နိုင်ဘူးဗျို့ ကျုပ်လည်း ဘယ်လို ဘယ်ပုံအိမ်ပြန်ရောက် ခဲ့မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ။
တကယ်ဗျာ ကျုပ်ဘ၀မှာ အပုန်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုအကျိုးပေးမှန်းမသိ ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေ အချိန်ရ ရင် ပြန်ရေးပြ ချင်သေးတယ် ။ အခုတော့ ခဏနားကြဦးစို့း)
Posted by သက်တန့်ချို at 10:15 AM 16 comments:
တစ်ခါတုန်းက မြို့ပြနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျေးရွာလေးမှာ အတူနေတဲ့ မြေးအဖိုး နှစ်ယောက်ရှိကြတယ် ။ မနက်တိုင်း မှာ အဖိုးဖြစ်သူက ထမင်းစားပွဲမှာထိုင်လို့ သူ့ရဲ့ ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ တရားစာအုပ်ကြီးကို ဖတ်နေလေ့ရှိ တယ် ။ မြေးဖြစ်သူကလည်း အဖိုးဖြစ်သူကို အားကျပြီး အဖိုးဖြစ်သူလုပ် တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်လေ့ ရှိတယ် ။
တစ်နေ့မှာ မြေးဖြစ်သူကမေးတယ် ။ “ အဖိုး ကျွန်တော်လည်း အဖိုးလို တရားစာအုပ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ် ဒါပေ မယ့် ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ် ပြီးတော့ နားလည်တဲ့အရာလေးတွေကလည်း စာအုပ်ပိတ် လိုက်ပြီဆို တာနဲ့ မေ့မေ့သွားတယ် တရားစာအုပ်ကို ဖတ်လို့ ဘာကောင်းကျိုးတွေရတာလဲ ” အဖိုးဖြစ်သူက တိတ်ဆိတ်စွာပဲ မီးဖိုထဲ ကို ကျောက်မီးသွေးတွေထည့်နေရာက လှည့်လိုက်တယ် ပြီးတော့ မြေးဖြစ်သူကိုပြောတယ် ။
“ ဒီကျောက်မီးသွေးထည့်တဲ့ ၀ါး ခြင်းတောင်းကို ယူသွား မြစ်ထဲမှာ ရေတွေခပ်ပြီး ပြန်သယ်လာခဲ့ပါ ”
မြေးဖြစ်သူက အဖိုးခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူအိမ်ကို ပြန်မရောက်ခင်မှာပဲ ၀ါးခြင်းတောင်းကနေ သူ ခပ်လာတဲ့ရေတွေအကုန်လုံးထွက်ကျပြီး ရေမပါပဲပြန်လာခဲ့ရတယ် ။ အဖိုးဖြစ်သူက ရယ်မောပြီး ပြောတယ် ။ “ နောက်တစ်ခါ ခပ်မြန်မြန်လေး ခပ်ပြီး ပြေးလာပေါ့ ငါ့မြေး ” ပြီးတော့ နောက်ထပ်တစ်ခါ ရေခပ်ဖို့ မြေးဖြစ်သူကို ထပ်ခပ်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ေ ကာင်လေးဟာ မြန်မြန်ပြေးတယ် ဒါပေမယ့် လည်း အိမ် မရောက်ခင်မှာ ၀ါးခြင်းတောင်းထဲက ရေတွေထွက်ကျပြီး ဘာမှ မပါလာခဲ့ဘူး ။ အမောဖြေပြီးတဲ့အခါ သူ့အဖိုးဖြစ် သူကို ပြောတယ် ။ “ ၀ါးခြင်းတောင်းနဲ့ ရေကိုခပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး ” အဲဒီလိုပြောပြီး ၀ါးခြင်းတောင်းကို လွှတ်ချ လို့ ရေခပ်ဖို့ ရေပုံးသွားရှာခဲ့တယ် ။ အဖိုးဖြစ်သူကပြောတယ် ။
“ အဖိုးက ရေပုံးနဲ့ခပ်တဲ့ ရေကို လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးမြေးရဲ့ ၀ါးခြင်းတောင်းနဲ့ ခပ်တဲ့ရေကိုလိုချင်တာပါ ငါ့မြေးလုပ်နိုင်ပါတယ် မင်း သေသေချာချာ ခက်ခက်ခဲခဲမကြိုးစားလို့ပါ ” ပြီးတော့ မြေးဖြစ်သူကို ၀ါးခြင်းတောင်း နဲ့ပဲ ထပ်ပြီးကြိုးစားစေခဲ့တယ် ။
အဲဒီအချိန်မှာ မြေးဖြစ်သူက ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ ဘယ်လောက် ထိ မြန်မြန်ပြေးပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားတာတောင် ရေတွေထွက်ကျတယ်ဆိုတာ သိအောင် အဖိုးဖြစ်သူ ကိုပြချင်ခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ မြေးဖြစ်သူဟာ မြစ်ဆီကို သွားပြီး ရေ ကို အမြန်ခပ် ခါတိုင်းထက်ပိုမြန်အောင်ပြေးပြီး အဖိုးဆီကိုပြန်လာခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ၀ါးခြင်းတောင်းထဲမှာတော့ ဘာရေမှ ရှိမနေခဲ့ဘူး ။ အမောဖြေပြီးတဲ့အခါ အဖိုးဖြစ်သူကိုပြောတယ် ။ “ အဖိုး တွေ့ပြီလား ဒါဟာ အသုံးမ၀င်ဘူးဆိုတာ ” “ ဒါက အသုံးမ၀င်ဘူးလို့ မြေးထင်သလား ” အဖိုးဖြစ်သူကမေးတယ် ။ ပြီးတော့ ဆက်ပြောတယ် ။ “ ခြင်းတောင်းကို ကြည့်လိုက် ”
ကောင်လေးက ၀ါးခြင်းတောင်းကို ကြည့်တယ် ပြီးတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်သူနားလည်လိုက်တာက ၀ါးခြင်းတောင်းဟာ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပဲ ။ အရင်က ကျောက်မီးသွေးတွေ သယ်ထား လို့ ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့ ၀ါးခြင်းတောင်းဟာ အခုတော့ သစ်လွင်တောက်ပြောင်နေခဲ့တယ် ။
“ ငါ့မြေး ဒါဟာ မင်းတရားစာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အဖြေပါပဲ မင်းဟာ အကုန်လုံး ကိုနားလည်ချင်မှ နားလည်လိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် အကုန်လုံးကို မှတ်မိချင်မှ မှတ်မိလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် မင်း တရားတော်တွေကို ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ မင်းရဲ့ ညစ်နွမ်းနေတဲ့ အတွင်းပိုင်း စိတ်သဏ္ဍာန် ဟာ ပြောင်း လဲဖြူစင် သွားပါလိမ့်မယ် ”
မြတ်စွာဘုရားက ကျွန်တော်တို့ကို တရားတော်တွေနဲ့ယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင် လမ်းမှန်ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေး ခဲ့တယ် ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်း တရားဓမ္မနဲ့နီးစပ်လို့ အမှန်တရားကို ထိုးထွင်း သိမြင်နိုင်တဲ့ သူဖြစ်အောင် လမ်းပြပေးခဲ့တယ် ။ မြတ်စွာဘုရားဟာ ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် လူသားအားလုံးကို အကောင်း ဆုံး အမှန်တရားကို ပြသပေးနိုင်တဲ့ “ လမ်းပြသူ ” ဖြစ်ပါတယ် ။
နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအနည်းငယ် လောက်ဖြစ်ဖြစ် တရားဓမ္မတွေကို လေ့လာဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညစ်နွမ်းခက်ထန်နေတဲ့ အတွင်းစိတ်တွေဟာ တရားဓမ္မတွေရဲ့အနှစ်သာ ရတွေကြောင့် ပျော့ပြောင်းဖြူစင် လာပါ လိမ့်မယ် ။
The Bible and the Old Wicker Coal Basket အားဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 2:27 PM6comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 3:31 PM 1 comment:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:31 AM 46 comments:
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ -- အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ လက်သမားဆရာကြီးတစ်ယောက်ဟာ အသက်အရွယ် အရသော်လည်းကောင်း အေးအေးလူလူနေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း အနားယူချင်နေခဲ့တယ် ။ လက်သမားဆရာက သူ့နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုသူ့ရဲ့ အကြံကိုပြောပြတယ် ။ အိမ်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်း ကနေ အနားယူချင်ပြီး သူ့ဇနီးနဲ့ သူ့မိသားစု တွေနဲ့အ တူတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ ၀မှာ နေထိုင် သွား လိုကြောင်းပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် လက်သမားဆရာကြီးက သူ့အလုပ်ရှင်ကို စာချုပ်အရရော အကြွေးတွေ ကျန်နေသေး တယ် ဒါပေမယ့် သူ အမှန်တကယ်ကို အနားယူချင်နေခဲ့တယ် ။
အလုပ်ရှင်က ဒီလို တော်တဲ့လက်သမားဆရာကြီးဆီက အနားယူမယ်ဆိုတဲ့စကားကြားရတဲ့အခါ စိတ် မကောင်းဖြစ် သွားတယ် ။ ပြီးတော့ လက်သမားဆရာကိုပြောတယ် ။ “ လူမှုရေးအရဖြစ်စေ ကျွန်တော့်ကို အိမ်တစ် လုံးလောက် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆောက်ပေးနိုင်မလား ” လက်သမားဆရာကြီးက “ ကောင်းပါပြီ ” လို့ပြောလိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် တကယ် နောက်ဆုံးအိမ်ကိုဆောက်တဲ့အခါ လက်သမားဆရာကြီးဟာ သူ့ရင်ထဲ နှ လုံးသား ထဲကနေ စိတ်မပါတော့ဘူး ။ နောက်ဆုံးအိမ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် စေတ နာလည်းလျော့ ရဲသွား သ လို စိတ်ကလည်းအနား ယူချင်စိတ်သာ စိုးမိုးနေခဲ့တယ် ။ သူဟာ စိတ်မပါတဲ့အ တွက် နောက်ဆုံး သူဆောက်ရမယ့်အိမ်ကိုလည်း ကရော်ကမယ် အဖြစ်လောက်ပဲ ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ် ။ အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းတွေ ကိုလည်း အရည်အသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးခဲ့တယ် ။
ဒီလိုနဲ့လက်သမားဆရာကြီးဟာ နောက်ဆုံးအိမ်ကို ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားခဲ့တယ် ။ အလုပ်ရှင်က အိမ်ကို လာကြည့်ပြီး လက် သမားဆရာကြီးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ အိမ်သော့ကိုယူပြီး “ ဒါဟာ ခင်ဗျားရဲ့ အိမ်ပါပဲ -- ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတာပါ ” လို့ပြောလိုက်တယ် ။
ဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းသလဲ ။ ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲ ။ အကယ်၍သာ လက်သမား ဆရာကြီးက သူ့အတွက်ပေးမယ့်အိမ်မှန်းသာ သိရင်သူပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အိမ်မှန်းသာသိရင် သူဟာ လက်ရှိဆောက် ထားတဲ့အိမ်နဲ့မတူတဲ့ ကောင်းမွှန်သပ်ရပ်တဲ့အိမ်ကို ဆောက်လုပ်မှာအမှန်ပါပဲ ။ အခုတော့ သူဆောက်လုပ် ထားတဲ့သိပ်မကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ကလေးမှာပဲ သူနေရတော့မှာ သူပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ် ။
ကျွန်တော်တို့ရော ?? ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိဘူး ကိုယ့်မပိုင်ရဘူး ဆိုပြီးအဖြစ်သဘော အလုပ်သဘော လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိနေမလား ? ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာရော ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသလဲ ။ ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ဘူး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘူး အပြု သဘော အဖြစ်သဘောတွေများ လုပ်ခဲ့ကြသလား ။
တကယ်တော့လောကကြီးမှာ ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ်ကိုယ့်အလုပ်လို ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားလို သဘောထားပြီး အကောင်းမွန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ ။
ကိုယ်မပိုင်ရဘူး ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဘာကိုမှ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းမလုပ်မိပါစေနဲ့ ။
ကိုယ်က အဖြစ်သဘောနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် အရှက်ရစ ရာတွေဖြစ်နေ တတ်တယ် ။
“ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့ ကိုယ်ပြုလုပ်တဲ့ အိမ်ကလေးအတွင်း မှာပဲ နေ ထိုင်ကြရတာပါ ”
How are you building your life? အားဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:58 PM7comments:
တစ်ခါတုန်းက တောအုပ်ထဲမှာ ပျော်နေတဲ့ မျောက်တစ်ကောင်ရှိတယ် ။ သူ ဗိုက်ဆာလာတဲ့အခါ အရသာရှိတဲ့ သစ်သီးတွေ စားလို့ သူ မောလာတဲ့အခါ အနားယူလို့ အဲဒီတောအုပ်ထဲမှာ ပဲ ပျော်မွေ့နေခဲ့တယ် ။ တစ်နေ့ မှာတော့ သူဟာ မျက်စိလည်လမ်းမှားရင်း အိမ်တစ်လုံးဆီရောက်လာခဲ့တယ် ။ အဲဒီမှာ သူမြင်လိုက်ရတာက အရမ်း ကို လှပတဲ့ ပန်းသီးတွေထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်လုံးကြီးကိုပေါ့ ။ သူက လက်တစ်ဖက်စီမှာ ပန်းသီးတစ်လုံးစီ ယူပြီး တောအုပ်ထဲ ပြန်ပြေးလာခဲ့တယ် ။
မျောက်က ပန်းသီးကို နှာခေါင်းရှုံ့ပြီးအနံ့ခံတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘာအနံ့မှ မရဘူး ။ ပြီးတော့ ပန်းသီးကို စားဖို့ကြိုးစားတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ့သွားတွေ နာကျင်ပြီး စားမရလောက်အောင်မာကြောနေတယ် ။ ပန်းသီးတွေ ဟာ တကယ်တော့ သစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အရမ်းလှတယ် ။ တခြားမျောက် လည်း အဲဒီပန်းသီးတွေမြင်တဲ့အခါ အလုအယက်ပြေးယူဖို့လာကြတယ် ။ အဲဒီအခါ ပန်းသီးပိုင် ရှင် မျောက်က သူ့ပန်းသီးတွေကို တင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်ထားလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ သူဟာ ဒီတောထဲမှာ သူ့ရဲ့ ပန်းသီးပိုင် ဆိုင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ သဘောတွေကျနေခဲ့တယ် ။ ပန်းသီးတွေ က နေရောင်နဲ့ကြည့် တဲ့အခါ နီရဲတောက်ပြောင်နေပြီး သူ့ကို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးနေ တယ်လို့ မျောက် ကခံစားနေရတယ် ။ ပန်းသီတွေကိုပဲ သူဂရုတစိုက်ကြည့်နေပြီး ပထမဆုံး သူ ဆာလောင်နေ တာကိုတောင် မေ့လျော့သွားခဲ့တယ် ။
သစ်သီးပင်တစ်ပင်က မျောက်ကို သတိပေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ့လက်ထဲကပန်းသီးတွေက လွဲလို့ မျောက်က ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး ။ သူစားဖို့ သစ်သီးခူးဖို့ အတွက်သူ့လက်ထဲက ပန်းသီးတွေကို မြေပြင်ပေါ် ခဏချရမှာ ကိုတောင် သူမချနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ တကယ်တော့ သူ နားလည်း မနားရသလို သူ့ ပန်းသီးတွေကို တခြားမျောက်တွေလာလုယူမှာစိုးတဲ့အတွက် အချိန်တိုင်းကာကွယ်နေရတယ် ။ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှုတစ်ခုအတွက် အရင်က ပျော်ရွှင်နေတဲ့မျောက်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေနည်းလာပြီး သစ်တောတလျှောက် မှာ လျှောက် သွားနေ ခဲ့ရတယ် ။
ပန်းသီးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း လေးပင်လာသလို ခံစားလာရတယ် ။ သနားစရာကောင်းတဲ့မျောက်ဟာ ပန်းသီးတွေကို လွှတ်ချလိုက်ဖို့ အတွက်စဉ်းစားတယ် ။ သူ မောနေပြီ -- သူ ဆာနေပြီ နောက်ဆုံး သစ်သီးပင်ပေါ်တက်လို့ သစ်သီးတွေ သူ မခူးနိုင်တော့ဘူး သူ့လက်ထဲမှာ စားလို့မရတဲ့ ပန်းသီးတွေ နဲ့ပဲပြည့်နေခဲ့တယ် ။ အကယ်၍ သူ့လက်ထဲက ပန်းသီးတွေကို လွှတ်ချလိုက်ရင် သူ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ?
သူ့လက်ထဲ သယ်ဆောင်ထားတဲ့ပန်းသီးတွေက ရူးသွပ်မှုတွေပဲလို့ သူမြင်လာတယ် ။ သူ အရမ်းလည်း ပင်ပန်းနေ ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး အသီးပင် ရောက်တဲ့အခါ အဲဒီအပင်က သစ်သီးရနံ့တွေကို သူ ရှုရှိုက်ရင်း သူအရာရာကို နားလည်သဘောပေါက်သွားတယ် ။ သူ့လက်ထဲက သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပန်းသီးတွေကို သူ မြေပြင်ပေါ် ပစ်ချလိုက် လို့ သူ့အစာအတွက် သစ်သီးပင်ပေါ်တက်သွားတယ် ။ သူ အခု ပြန်ပြီးပြုံးပျော်နိုင်ပါပြီ ။
မျောက်ကလေးလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ထင်မိတဲ့ အရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တလျှောက် လုံး သယ်ဆောင်ထားကြတယ် ။ ပုံပြင်လေးရဲ့အဆုံးက ၂ ခုဖြစ်နိုင်တယ် ။ မျောက်ဟာ နောက်ဆုံး သစ်သီး ပင်အောက်မှာ သူ့ပန်းသီးတွေကို မစွန့်ပယ်နိုင်လို့ ရင်မှာ ပိုက်ရင်း သေပွဲ ၀င်သွားခဲ့တယ် ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်အပေါ် မှာရေးခဲ့သလို ပန်းသီးတွေကို လွှတ်ချလို့ ကိုယ့်ရဲ့ ရှင်သန်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင် မှုကို ရွေး ချယ်လိုက်တယ် ။ ကဲ ကိုယ်မစားနိုင်တဲ့ ကိုယ်တဲ့အသုံးမ၀င်တဲ့ သစ်သားပန်းသီးကို ရင်မှာ ပိုက်ပြီး တကယ်စားနိုင်တဲ့ သစ်သီးပင်အောက်မှာ သေပွဲ ၀င်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မဖြစ်သင့် ဘူးမဟုတ်လား ။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာရော မျောက်ကလေးလိုပဲ ဘာတွေကို သယ်ဆောင်ထားမိကြပါလိမ့် ။ စည်းစိမ် ဥစ္စာ တွေလား ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေလား ၊ စိတ်ပျက် ၀မ်းနည်းစရာတွေလား ၊ မာန်မာနတွေလား ၊ ဘွဲ့ထူးဂုဏ် သိမ်တွေလား တစ်ခုခုကိုတော့ သယ်ဆောင်ပြီး တောအုပ်ထဲ ကျွန်တော်တို့ေ လျှာက်သွားနေမိကြတယ် ။
“ လွှတ်ချသင့်တဲ့အရာကို လွှတ်ချသင့်တဲ့အချိန်မှာ လွှတ်ချနိုင်မှသာလျှင် တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားနိုင်လိမ့်မယ် ”
The Monkey With The Wooden Apples အားဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 5:05 PM3comments: